Serbia: Fihetsik’ireo Blaogera Afrikana Manoloana Ny Nisamborana An’i Karadžić · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraElia Varela Serra
Voadika ny 27 Desambra 2018 8:10 GMT
Fanamarihana: lahatsoratra navoaka tamin'ny Jolay 2008
Taorian'ireo vaovao nilatsaka tamin'ny Alatsinainy hariva hoe voasambotra ilay mpitondra Bosnian Serb teo aloha sady iray tamin'ireo olona tena nokarohina fatratra erantany Radovan Karadžić , dia nanomboka naneho hevitra mikasika ilay tantara avokoa ireo blaogera ankon'ny fahagagana tao Balkans sy ireo rehetra erantany. Ary noho ny fangatahan'ny Lehiben'ny Mpampanoa Lalàna Iraisam-pirenena (ICC), Luis Moreno-Ocampo hanenjika ny Filoha Sodaney Omar al-Bashir, niroso tamin'ny fampitahana an'ireo raharaha roa ireo ny blaogera sasantsasany.
Ohatra, ny Greater Surbiton, blaogy iray mifantoka amin'ny ao Balkans, naneho hevitra hoe:
Tokony ho nankalazaina ny fiampangana an'i Bashir, satria na ho vita na tsia ny hitondra ity mpanao jadona ity hiatrika fitsaràna, efa fantsika iray amin'ny vatapaty politikany io, tosika iray no handefa azy lalindalina kokoa hizotra amin'ny làlana efa nizoran'i Milosevic sy Karadzic. Hitombo ny fanokana-monina azy iraisam-pirenena, hihena izay mba hany sisa maha-ara-drariny ananany; ho sarotra ho an'ireo Fanjakana hafa ny hiara-hiasa aminy, ary raha tafavoaka velona amin'ny fanonganana azy mety hitranga izy, tokony hiara-hiasa amin'ny ICC izay fitondrana mpandimby azy eo mba hitondrana azy hiatrika fitsaràna, izay ho fanoitra ho an'ny fanavaozana demokratikany – sahala amin'ny naha-fanoitran'ny fanatsarana demokratikany fiaraha-miasa an-tery niarahana tamin'ny ICTY, tao Serbia, Kroasia ary Bosnia…
Toy izany koa, ampilaharin'ireo blaogera afrikana ihany koa ny fiampangana sy fisamborana an'i Karadžić sy ireo fanambaràna ho avy mahakasika ireo afrikana mpanao didy jadona toa an-dry Omar al-Bashir ao Sodàna na i Rober Mugabe ao Zimbaboe (fifanandrifian-javatra, nanambara i Sokwanele fa omaly hariva namoaka lahatsoratra iray ny Enough and Impunity Watch mikasika ny “safidy araka ny lalàna manan-kery amin'ny fiampangana ny Filoham-pirenena Robert Mugabe tamin'ireo heloka bevava iraisam-pirenena mety nitranga”).
Faustine Barraza, blaogera iray avy ao Tanzania, naneho hevitra hoe:
Ankehitriny toa sahala amin'ny hiatrika tribonaly i Karadzic […] Lesona tsara io ho an'ireo afrikana mpanao didy jadona izay jeren'izao Tontolo izao izany, ary indray andro any, mety ho antsoina izy ireo hanazava izay rehetra nataony. Manantena aho fa hitandrina i Al-Bashir sy Mugabe.
Musengeshi Katata avy amin'ilay blaogy mifantoka amin'ny Repoblika Demaokratikab'i Kôngô “Forum Réalisance” [Fr] nampitandrina ihany koa an'ireo hafa mpanao didy jadona :
Il n'y a pas meilleur avertissement pour Omar el Béchir, le prochain candidat de la Cour Internationale de Justice. Ainsi qu'à tous ceux qui croient qu'ils peuvent, sans tenir compte de nos valeurs, de notre éthique et morale humaine, nous servir impunément leurs bassesses quelques soient les fonctions qu'ils exercent, leur nationalité, leur confession, la couleur de leur peau. And justice for all.
Tsy misy fampitandremana tsara noho izany ho an'i Omar el Béchir, kandidà ho an'ny Fitsaràna Iraisam-pirenena. Ary koa ho an'ireo rehetra izay mino fa ho afaka izy ireo, tsy hisy fanomezan-danja akory ny maha-olona antsika, ny fitsipi-pitondrantenantsika sy ny toetsaina maha-olombelona, manery antsika hanaraka ny saina mirefarefa ananany, tsy misy fanasaziana, na toa inona na toa inona asa iandraiketan'izy ireo, ny zom-pirenena zakainy, ny finoana arahan'izy ireo, ny volon-koditr'izy ireo. Ary ny rariny ho an'ny rehetra.
Black River Eagle avy amin'ny blaogy Jewels in the Jungle miresaka momba ireo olana afrikàna, mandray anjara amin'ny adihevitra ao amin'ny vovonana African Loft, nanontany tena hoe:
Aleo jerentsika eo raha toa i Serbia hanolotra an'io eoropeana mpanao heloka bevava io amin'ny ady io eo amin'ny fitsarana any Den Haag (La Haye) na hitaky azy ho tsaraina araka ireo tribonaly nasionaly any amin-dry zareo. Hisy vokadratsy eo amin'ny asa fiampangana sy ny fitsarana mbola amperiny miandry an'i Omar al-Bashir ao amin'ny ICC io raha toa miziriziry ireo Serba hanatanteraka itsy farany
Koa satria ve miozolomana izy, filoham-panjakana amperinasa amin'ny firenena Afrikana iray, dia tokony tsy iharan'ny fitsarana iraisam-pirenena ? Amin'ny anaran'ny fandriampahalemana ho an'i Darfour sy ny fifanarahana politika nifandresena lahatra izay hijoro hisedra ny fotoana ve? Avelao hiala sasatra kely aho. Manana traikefa manokana amin'ny famonoana olona sy ny fanolanana faobe an'ireo miozolomana an-tapitrisany tao Eoropa i Karadzic, ary eo andalam-pilatsahana ilay fitrohana, manome antoka anareo aho.
Nanolotra ny heviny mikasika ny fisamborana an'i Karadžić teo amin'ny blaogy “Have your say” ireo Afrikana sasantsasany hafa, tao anatin'ny lahatsoratry ny omaly mikasika ny fisamborana azy. Ity ny santionany.
Arnaud Ntirenganya Emmanuel, Roandey iray ao Kamerona:
Amin'ny maha-niharandoza noho ny fandripahana Roande, tsy ampy ny fisamborana fotsiny an'i Radovan Karadzic, mendrika ny ho tsaraina haingana io lehilahy io ary mendrika ny hanonitra ireo hirifiry sy ny fahantrana vokatry ny nataony. Tsy afaka hanampy hitsabo fotsiny an'ireo ratra ny fisamborana azy raha tsy atao mitovy tanteraka amin'ny fomba nataony tamin'ireo niharam-boina ny havaly azy. Amiko, mangina aho rehefa ahanton-doha avokoa ireo tomponantoka rehetra tamin'ny fandripahana Roandey.
Tsy tokony ho fiarovana ho azy ireo sy hiteraka hirifiry lavareny ho an'ireo teratany tsy manampidiny ny resaka maha-filoham-pirenena miafina ambadiky ny fipetrahana manaraka ny fotokevitra fiandrianmpirenena, sahala amin'izay mitranga amin'i Zimbaboe, Sodàna-Darfur. Tokony ho helohina faran'izay haingana indrindra i Omar al Bashir ary faranana ireo adihevitra mikasika an'ireo raharaha lazaina fa mahakasika azy, satria hahafahana manafaingana ny fampitsaharana ny ady an-trano ao Darfour io.
George Wills Bangirana:
Tena vaovao mahaliana io ho an'ny teratany rehetra manerana an'izao tontolo izao, saingy indrindra indrindra ho antsika, ao Afrika, izay miaina ny herisetran'ireo mpitondra antsika omaly sy ankehitriny.
Tafahoatra noho izay takatry ny saiko ny hoe nahoana ireo olona “natanjaka” fahiny ireo izay nitàna toerana politika no namela karazana loza maro ho an'ireo olona izay heverina ho tokony narovany, tsy nisy fisalasalana kely akory, avy eo rehefa tonga ny anjarany, dia miaina toy ny voalavo – manaraka ny fomban'i Saddam – izy ireo na mitalaho amin'ireo olona izay nanaovany herisetra ihany mba hahazoana fanampiana sy fitserana. Manamarina zavatra iray monja izany: tsy misy fepetra maharitra eto an-tany ary tokony hitandrina ireo mpitondra. Angamba tsy ho ela ny anjaranareo.
Na dia tsy hanangana indray an'ireo maty izay novonoiny aza ny nahasamborana an'i Karadzic. Hampiova hevitra an'ireo hafa mpanao didy jadona na ireo fitondrana jadona toa an-dry Mugabe ao Zimbaboe, Bashir ao Sodàna ary ny governemanta ao Birmania izany.
13 Aogositra 2021Kamerona
#FreeRebecca: Melohin'ny Global Voices Afrika Atsimon'i Sahara ny fisamborana an-tondromolotra sy ny fihazonana an'i Rebecca Enonchong, mpitarika resaka teknôlôjia ao Kamerona